အံဩစရာချီးကျူးမှုတွေလုပ်ပြီး မန်ယူနံပါတ်၁ဂိုးသမား ဘယ်သူဖြစ်သင့်လဲဆိုတာ ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ မော်ရင်ဟို – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်နဲ့ စပါးနည်းပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ မော်ရင်ဟိုကတော့ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ဂိုးသမား ဟန်ဒါဆန်နဲ့ပက်သက်ပြီး
အစက်၂၄နစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ဂိုးသမားလေးဟာ ရှက်ဖီးမှာအဌားချထားကတည်းက အထင်ကြီးလောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသထားပြီးနောက်ပိုင်းယူနိက်တက်အသင်းရဲ့နံပါတ်၁ကစားသမားဒီဂီယာနေရာကိုခြိမ်းခြောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ လစာအများဆုံးကစားသမားဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကတော့ ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်ပွဲမှာ ပယ်နယ်တီ၁၁လုံးမဖမ်းတဲ့နိုင်တဲ့အပြင် သူကန်ခဲ့တဲ့ ပယ်နယ်တီလွဲချော်သွားခဲ့လို့ အပြင်းအထန်ဝေဖန်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဒင်းဟန်ဒါဆန်က အင်္ဂလန်အသင်းမှာ အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ရိုးမားနည်းပြအသစ်ဖြစ်လာမယ့် မော်ရင်ဟိုက “အလွန့်အလွန်ကောင်းတဲ့ ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
ယူနိက်တက်နည်းပြဟောင်းမော်ရင်ဟိုက သူအိုးထရက်ဖို့မှာ ရှိစဉ်တုန်းက ဟန်ဒါဆန်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ပက်သက်ပြီး Timesကိုခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
” သူကလုံးဝသူ့ကိုသူ ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ သူ့ကိုလုံးဝယုံကြည်လို့ရတယ်”လို့မော်ရင်ဟိုကဆိုလိုက်ပါတယ်.
ယူရို၂၀၂၀ အင်္ဂလန်အသင်းက ဂိုးသမားတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးလည်း ” အကုန်လုံးကတော့ ကောင်းတဲ့ဂိုးသမားတွေချည်းပဲပေါ့။
ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ ခုမဖြစ်သေးတာနော်။ သူကမကြာခင်မှာဖြစ်တော့မှာ။ သူကအံဩဖွယ်ရာပင်ကိုယ်ထူးချွန်တဲ့ဂိုးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ။
ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ သူကလေးဘဝက ကျွန်တော့်ကိုလာမေးတာ။ သူအဌားသွားကစားရမှာလားတဲ့”
“ပြီးတော့သူပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ပြန်လာရင် နံပါတ် ၁ဂိုးသမားဖြစ်စေရမယ်တဲ့။ ကလေးဘဝလေးနဲ့ မယုံကြည်လောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် အရာရာက သူ့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပီလို့ကျွန်တော်သေချာပါတယ်။”လို့မော်ရင်ဟိုက ဟန်ဒါဆန်ကိုချီးကျူးသွားပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဖန်တွေက ယခုထက်ထိ ယူနိက်တက်အသင်းအတွက် ဘယ်ဂိုးသမားက နံပါတ် ၁ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ငြင်းခုံနေဆဲပါပဲ။
နည်းပြဟောင်းမော်ရင်ဟိုကချီးကျူးသွားပေမယ့် ဒီရာသီမှာ ဟန်ဒါဆန်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေပါတယ်။ နည်းပြဆိုလ်းရှားဟာလည်း လာမယ့်ရာသီမှာ ဒီဂီယာ ဟန်ဒါဆန်တို့နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြတ်သားတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဒါဆန်ကတော့ သူသာနံပါတ် ၁ဂိုးသမားနေရာမရရင် အသင်းကထွက်ခွာသွားတော့မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။
ပရိတ်သတ်တွေရော မော်ရင်ဟိုပြောတာလက်ခံလား? ယူနိက်တက်အသင်းအတွက် နံပါတ် ၁ဂိုးသမားက ဘယ်သူဖြစ်သင့်နေပီထင်ပါသလဲ?
အခက်အခဲတွေကြား မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ကမ္ဘာကျော်”Billie Jean”သီချင်းနဲ့ က ပြခဲ့တဲ့ စူပါလင်းဂက်(ရုပ်/သံ)